OpenShift အပေါ် ASP.NET: ASP.NET အတွက်စတင်အသုံးပြုခြင်း
16 မာ 2017
အဘယ်ကြောင့် OpenShift အပေါ် ASP.NET တစ်ခုနိဒါန်း?
သင့် template SELECT
OpenShift အသုံးချဖို့ ASP.NET ဖှံ့ဖွိုးတိုးလုပ်နေတာ၌ငါ ASP.NET အပေါ်အစပိုင်းအဲဒီမှာအနည်းငယ်လဲ tutorial ထွက်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်
ခ) ကလည်ပတ်သောမည်သို့မည်ပုံ၏ rudiments ကျော်မသွားဘူး
ကိစ္စတွင် OpenShift အပေါ် ASP.NET အသုံးချမည်, သင်ကနားမလည်ဖို့စွမ်းရည်ရှိသင့်!
ဒီသင်ကြားပို့ချလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်အတွက်, သင်တို့ကိုငါ OpenShift ပေါ်တွင်သင်၏ဆောင်ရွက်ချက်ချပြီးစတင်မီဘယ်လို ASP.NET လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်သင်သည်အဘယ်သို့လုပ်နေလုပ်နေ၏အခြေခံ comprehension ပေးကြဖို့အခွင့်အလမ်းမှာခုန်ချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မကြာခင်အလုံအလောက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထဲမှာမှရလိမ့်မယ်။
ဒီသင်ကြားပို့ချလေ့ကျင့်ခန်း၏အစိတ်အပိုင်းများ 1 နှင့်2၌ငါ Visual Studio အဝန်း 2015 အတွက်အပြင်အဆင်အသုံးချဖို့အားဖြင့်လျှင်မြန်စွာစတင်မကူးမသွားမည်ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ကဤအပိုငျးတှငျအ Windows အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုလို။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ငါ Linux သို့မဟုတ် Mac ကိုမှသက်ဆိုင်ရာနှင့်ဖြည့်စွက် Windows တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်သည့်သင်ကြားပို့ချလေ့ကျင့်ခန်းပြီးဆည်းပူးနေအတွက် Visual Studio က Code ကိုအတွက်အပြင်အဆင်မရှိဘဲအရာအားလုံးလုပ်နေတာတွေနဲ့အောက်ခြေဖို့ပိုထိပ်တန်း run ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကို Windows အသုံးချဖို့မဟုတ်ပါဘူးကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်သည်မည်သည့်အမှု၌ .NET Core တစ်ခု REST အဆုံးမှတ်စေရန်မည်သို့အထွေထွေအတွေးရဖို့အစိတ်အပိုင်းများ 1 နှင့်2အတွက်တစ်လျှောက်တွင်အပြီးယူနိုင်ပါတယ်။
ပုဒ်မ 1 - တစ်ဦး ASP ဝန်ဆောင်မှု Up ကိုချိန်ညှိခြင်း
တစ်ဦး Controller အသုံးချဖို့အခြေခံ ASP ဝန်ဆောင်မှုအောင်အားဖြင့်သင်တို့ကိုပယ်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ငါသည်သင်တို့ကို Controllers MVC မှအပေါ်လုံးဝရွေ့လျားမတိုင်မီအလုပ်လုပ်ပုံကိုကြည့်ပါသေချာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Visual Studio မှာတော့ (ကျနော်အဝန်း Edition ကို 2015 အသုံးချဖို့ပါပဲ) ဖိုင်မှတ်တမ်းထိုနောက်မှနယူးစီမံကိန်းကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အဆိုပါ Templates ကိုအောက်မှာ -> Visual C # -> Web ကိုစည်းရုံးရေးမှူး, ASP.NET Core က်ဘ်လျှောက်လွှာ (.NET Core) ကိုရွေးပါ။ ဒါဟာဒီ .NET Cross-ဇာတ်စင်စာကြည့်တိုက်ဖြစ်သကဲ့သို့သင် .NET Core မ .NET Framework ကို select လုပ်ကြောင်းဝေဖန်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အကျိုးတူ name ကိုရိုက်ထည့်ပါ - ဤငါ MeowWorld ကတောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်ဒီသင်ကြားပို့ချလေ့ကျင့်ခန်းအတွက်, သင်ချင်ပါတယ်ဘာမှရှိနိုင်ပါသည်။
သင်တန်းကိစ္စနှင့်အမျှဤတည်နေရာကိုသင့်ရဲ့ Visual Studio စီမံကိန်းများစည်းရုံးရေးမှူး၌ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း, သငျသညျတစ်နေရာတခြားညွှန်ကြားချက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့အခွင့်အလမ်းထဲကတစ်ကန်ရင့်သောဖြစ်ရပ်၌ဤပြောင်းလဲပစ်ရန်တွန့်ဆုတ်ကြဘူး။
ကျနော်တို့အခြားအစီအစဉ်ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ် (အဖြေတစ်ခုသင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ယင်းကွဲပြားခြားနားလှုပ်ရှားမှုများရရှိထားသူတစ်ဦး Ace အကျိုးတူဆင်တူ) နှင့်ကျနော်တို့အစီအစဉ်တစ်ခုခုအမည်ကိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင်တန်းကိစ္စသကဲ့သို့, အစီအစဉ်သည်သင်၏အကျိုးတူကဲ့သို့တူညီသောအမည်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် splendidly ဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်စွန့်လွှတ်။ က may အဖြစ်သင်ဖို့အခွင့်အလမ်းထဲကတစ်ကန်ရင့်သောဖြစ်ရပ်၌အမည်ပြောင်းရန်ကြိုဆိုထက်ပိုနေရလိမ့်မည်။
တစ်ဦး Directory ကို Create သေချာအောင်လုပ်ပါဓြှု - ဤသူသည်သင်တို့ဘာလုပ်နေနားမလည်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းအပေါ်ဝေဖန်သည်မဟုတ်, အစားကရေးစပ်သောအရာတို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အတူတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောသဘောတူညီချက်ကူညီပေးသည်။
သငျသညျထိုနည်းတူ Visual Studio ကသဘာဝကျကျတစ် git စတိုးဆိုင်စေနိုင်ပါသည်။ ဒီတစ်ခုသင်ကြားပို့ချလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်, သေးပိုကြီးစကေးများအတွက်တိုးချဲ့, သင်ဖို့လိုပမေအဖြစ်ငါမလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
သင် setting များကိုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတဦးတည်းနှင့်အတူအကြောင်းအရာတဲ့အခါအောက်ပါချဲ့မနေတော့ပေါ်သို့ရွှေ့ဖို့ OK ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဒီနေရာတွင်သုံးရွေးချယ်မှုဖုံးရမည်။ ဒီသင်ကြားပို့ချလေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်သင်က Web API ကိုရှေးခယျြမှုကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ငါအနာဂတ်လဲ tutorial နှင့်အတူအခြားနှစ်ခုသို့အရပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်ဤအခိုက်မှာအကျိုးတူစုဝေးနှင့် run သောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်ပြုလုပ် / program တစ်ခုပြတင်းပေါက် (သို့မဟုတ် tab ကို) ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သင်တို့ဆီသို့ ... / programming interface / တန်ဖိုးများကိုယူပါလိမ့်မယ် - ဒီသရုပ်ပြတစ် JSON စပျစ်သီးပြွတ်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်အရာ:
သင့်ရဲ့ program ကိုပိတ်လိုက်ခြင်းနှင့်သင်ကပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်သောရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ (အခါသင် mouse ကို-ကျော် "Debugging Quit" ပြောပါတယ်) ကိုအနီရောင်စတုရန်းဖမ်းဖျစ်ညှစ်အားဖြင့်သင့်အကျိုးတူရပ်တန့်အာမခံပါသည်။
> src - -> စီမံကိန်းအမည် -> Controllers -> ValuesController.cs ကဖွင့်လှစ်သည့်ဖြေရှင်းချက် Explorer ကိုခုနှစ်တွင်ဖြေရှင်းချက်အမည်သွားပါ။
နည်းလမ်းများအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတစ်ခု Http ရှိပုံကိုကြည့်ရှုပါ ... သူတို့နှင့်အတူ related "ရို (HttpGet, HttpPost, HttpPut, andHttpDelete) ။ ဒါကကို http နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည် - HttpGet` ဝဘ်စာမျက်နှာရတဲ့အတှကျအအသုံးပြုသွားမည်ကြိတ်ဆုံတစျခု၏ပြေးသည်။ ရန်တွေ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင် string ကိုအချက်များ (- အကြာတွင်လမ်းကြောင်းအပေါ်ပိုပြီးသို့မဟုတ်သင်တန်းဒေတာ) အဖြစ်တိုင်း method ကိုကူးမြောက်နိုင်ပါတယ်။
ထိန်းချုပ်မှုစာအိတ်ပေါ်မှာ Right-Click နဲ့ CatController ဟုခေါ်တွင်သည်အခြားလူတန်းစားပါစေ။
ပြီးပြည့်စုံသောသင့်ရဲ့ကုဒ်ကိုစောင့်ရှောက်ကူညီရန်အ Microsoft.AspNetCore.Mvc စာကြည့်တိုက်ထည့်ပါ။
သင့်ရဲ့လူတန်းစားမှပူးတွဲပါ Meow နည်းလမ်း Add:
အခုတော့ code ကို run ။ သင့်ရဲ့အစီအစဉ်မှာ localhost မှ / ကြောင် / ဥပဒေကြမ်း / ကပ်: ##### ကိုမှန်ကန်အသက်တာ၌သင်၏အလုပ်ကြည့်ဖို့။
သငျသညျ) string ကိုဘီလ် (ဖွင့်ရန် "Yowl ()" ( "ကြောင် / ဥပဒေကြမ်း") HttpGet peruse မှ ( "/ ကြောင် / ဥပဒေကြမ်း") HttpGet ဖြစ်ပေါ်နေသောနှင့်ဆီးခုံမို့မို့ string ကိုကနေနည်းလမ်း၏အမည်ကိုပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။
မ controller ကို၏အမည်ကိုဒါမှမဟုတ်နည်းလမ်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုလမ်းကိုပြုလုပ်၏မှတ်ချက်ကိုယူပါ။ ဒါဟာအရာအားလုံးသို့သော်ကိုက်ညီအောင်, ဒါ code ကို refresh ပုံမှန်အလေ့အကျင့်မယ့်:
အခုဆိုရင်သင် code ကို run ခြင်းနှင့်ရန်သင့် program ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်သည် ... / ကြောင် / Steve /
ကျနော်တို့ကြောင်အပါအဝင်ဆက်လက်သေးသောအသီးအသီးအဖြစ်ထင်ရှားစွာနာကျင်ကျိန်းစပ်ဖြစ်ရနိုငျသညျ, ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲရန်များအတွက်နည်းလမ်းအောင်နိုငျသညျ။ ကျနော်တို့မေးခွန်းတစ်ခု string ကိုအဖြစ်အောင်မြင်ပြီးပါလိမ့်မည်သောကြောင်နာမအဘို့ရန်တွေ့အသုံးချရန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကုဒ်ယခုတူနိုင်သည်
အခုတော့ code ကို run ဖို့သင့် browser ကိုညွှန်ကြား: ... / ကြောင်? ကြောင် = ဥပဒေကြမ်း ပြီးတော့ ... / ကြောင်? ကြောင် = စတိဗ်
ယခုငါတို့သို့သော် URL ကိုအတန်ငယ် jumbled ဖြစ်ပါသည်, အလားတူနည်းလမ်းအတွက်ကြောင်ရှိသည်။ ဒါကလမ်းကြောင်းမှတဆင့်အချက်များမယ့်အရပ်၌ကြွလာဖြစ်ပါတယ်ကျနော်တို့လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးကုဒ်မှအနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုပါပဲ။ :
ထို့အပွငျ, ယခုတွင်ငါတို့သည်အသုံးချဖို့မှ backpedal နိုင်သည် ... / ကြောင် / ဥပဒေကြမ်းနှင့် ... / ကြောင် / Steve ။
ဒီတင်ပြချက်၏ကနဦးအစိတ်အပိုင်းထိုသို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကြောင်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့ပြောဒီနည်းလမ်းနှစ်ခုအောင်, သင်နှစ်ခု API ခေါ်ဆိုမှုနှင့်အတူတစ် ASP.NET ကို web service ကိုအောင်အတွက်စတင်ဖွင့်! ကြှနျတေျာ့ကိုနောက် post ကိုကျနော်တို့ကကြောင် swarm ကြီးထွားအဖြစ်, ရတဲ့နှင့် setting ဒေတာနှင့်ဘယ်လိုအစည်းအဝေးများအလုပ်လုပ်ဆှေးနှေးပါမညျ။
Red Hat Certified Engineer ဖြစ်လာ | -RHCE လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
-RHCE လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး - ဘယ်လို Red Hat Certified Engineer ဖြစ်လာဖို့